China FK803 Automatic Rotary Now Bottle Labeling Machine ụlọ ọrụ na ndị na-ebu ya | Fineco
Akpaaka Label igwe
Sid Labeling Machine
Kalama Label igwe
Igbe / Carton Labeling Machine
Kaadị / Bag / Pouches Labeling Machine
Igwe ihe nyocha
Bipute ma tinye Ngwa Label
Ọkara akpaka labeling Machine
Labdị Nyocha Ngwaọrụ Pụrụ Iche
Usoro ancillary igwe
Adalata Sealing na Cutting Machine
Ngwaọrụ nkwakọ ngwaahịa ndị ọzọ
Ihe Ndị Ahịa
Ulo oru nri
Industrylọ Ọrụ Chemical
FK803 Automatic Rotary Now Bot Label Machine
FK803 kwesịrị ekwesị maka ịkọ aha na ngwaahịa ndị nwere nkọwa dị iche iche, dịka karama ịchọ mma, karama mmanya na-acha ọbara ọbara, karama ọgwụ, karama karama, karama plastik, PET gburugburu kalama akara, akara karama plastic, nri nri, wdg.
Igwe njirimara FK803 nwere ike ịchọpụta akara izu zuru ezu na akara ọkara okirikiri, ma ọ bụ akara njirimara abụọ na ihu na azụ nke ngwaahịa ahụ. Enwere ike ịhazi oghere n'etiti aha ihu na azụ, na usoro ndozi dịkwa mfe. A na-ejikarị ya eme ihe na karama akara na nri, ihe ịchọ mma, ị wineụ mmanya, ọgwụ, ihe ọ beụverageụ, ụlọ ọrụ kemịkalụ na ụlọ ọrụ ndị ọzọ, ma nwee ike ịghọta akara ngosi semicircular.
Ngwa ngwa ngwa:
FK803 nwere ọrụ ndị ọzọ iji gbakwunye nhọrọ:
① Nhọrọ igwe akpaka na-agbanwe agbanwe.
A-Ọ nwere ike jikọọ na mmepụta akara iji ghọta obere akpaka na melite mmepụta arụmọrụ.
A-machine Igwe ihe eji eme onu ahia nwere ike ibuputa ubochi mmeputa, oge ngwupu ya na mmeputa nke ntaneti, nke na-ebelata usoro ntaneti na eme ka oru oma di nma.
Function Automatic nri ọrụ (jikọtara na ngwaahịa echiche);
Function Ọrụ nchịkọta ihe na-akpaghị aka (jikọtara ya na echiche ngwaahịa);
⑥ Meewanye akara ngosi;
Thezọ ngbanwe nke FK803 dị mfe, na-anakwere usoro ntinye aha nke sponge, ntinye akara aha dị elu, njehie ahụ siri ike iji anya nkịtị hụ, ọ bụkwa nhọrọ kachasị mma maka ngwaahịa ndị chọrọ nnukwu mkpụrụ.
FK803 na-ekpuchi ebe dị ihe dị ka mita cubic 2.92.
Kwado igwe nyocha ahaziri iche dịka ngwaahịa a.
Kpụrụ ọrụ: Akara nyocha, - ihe mmetụta ngwaahịa na-eziga akara na PLC, ebe a na-edozi akara ngosi ahụ ma ziga ya n'akụkụ dị iche iche dị ka motọ, wee malite mbido.
Usoro ederede: Nri nri (enwere ike ijikọ ya na akara mgbakọ) → Ntọala → Nchọpụta → Nkọwapụta → Nchịkọta.
Chọrọ Production Label
1. Oghere dị n'etiti akara na akara ahụ bụ 2-3mm;
3. Akwụkwọ ala nke akara ahụ bụ nke glassine, nke nwere ezigbo ike ma gbochie ya imebi (iji zere igbutu akwụkwọ ala);
4. Oghere dị n'ime nke isi bụ 76mm, na mpụta dị n'okpuru erughị 280mm, edozi n'usoro otu.
Ekwesịrị ijikọ mmepụta aha dị n'elu yana ngwaahịa gị. Maka ihe achọrọ, biko rụtụ aka na nsonaazụ nkwukọrịta na ndị injinia anyị!
Nkọwa ziri ezi (mm): mm 1mm (njehie kpatara ngwaahịa na akara adịghị echegbu)
Elinggba ọsọ ọsọ (PC / min): 30～80pcs / min (mmetụta nke ngwaahịa na labeelu)
Product Ngari Ngwaahịa Dị Mma: φ25mm～φ100mm; Elu:25mm～150mm (Anyị nwere ike ime ya dị ka sample gị dayameta)
Size Nke kwesịrị ekwesị labeelu size (mm): ogologo: 20mm～380mm;Obosara: 15mm～100mm
Supply Ike ọkọnọ: 220V / 50HZ
Arọ (n'arọ): banyere 45kg
Roll Mpịakọta ọkọlọtọ dị n'ime Inye dayameta (mm): φ76mm
Roll Mpịakọta mpịakọta kwesịrị ekwesị Mpụga mpụga (mm): φ300mm
◆ Ike (W): 655W
◆ Ngwaọrụ (mm) (L × W × H): banyere 1900mm × 1100mm × 1400mm
Mbanụ. Nhazi Ọrụ
1 Ugboro abụọ n'akụkụ Guardrails mee ka karama ahụ kwụ ọtọ, enwere ike ịhazigharị dịka dayameta nke karama ahụ si dị.
2 Na-enyocha aha isi nke labeler, tinyere labeelu-winding na-akwọ ụgbọala Ọdịdị.
3 Ihuenyo mmetụ aka arụ ọrụ na ịtọ ntọala.
4 Belt Rotary igwe na-ebugharị iji gbanwee ngwaahịa mgbe ị na-ede aha.
5 Igbe Eletriki tinye nhazi kọmputa.
6 Nchịkọta efere nakọta ngwaahịa ndị a kpọrọ aha.
7 Ngbasa Ohere -eme ka ọ bụla 2 ngwaahịa na-ụfọdụ anya.
8 Ndị mmezi ejiri gbanwee ọnọdụ aha.
9 Mberede Kwụsị kwụsị igwe ma ọ bụrụ na ọ na-agba ọsọ na-ezighi ezi.
1) Control System: Japanese Panasonic akara usoro, na elu kwụsie ike na oké ala ọdịda ọnụego.
2) Operation System: Agba ihuenyo mmetụ, ozugbo visual interface mfe operation.Chinese na English dị. Mfe ịgbanwe niile eletriki oke na nwere agụta ọrụ, nke na-enye aka maka mmepụta management.
3) Nchọpụta System: Iji German LEUZE / Italian Datalogic label sensor na Japanese Panasonic ngwaahịa sensor, nke na-echebara akara na ngwaahịa, si otú a hụ oke ziri ezi na arụmọrụ arụmọrụ. Ukwuu na-azọpụta ọrụ.
4) Alarm Function: Igwe ahụ ga-enye mkpu mgbe nsogbu bilitere, dịka nkwụsị akara, akara agbajiri, ma ọ bụ ọrụ ndị ọzọ.
5) Ngwaọrụ Ngwa: Igwe na akụkụ ndị ọzọ na-eji ihe igwe anaghị agba nchara na anodized agadi aluminom alloy, na akwa corrosion eguzogide na mgbe nchara.
6) Kwadebe na voltaji transformerto gbanwee na mpaghara mpaghara.
Nke gara aga: FK603 Semi-Automatic Root Bottle Labeling Machine
Osote: FK805 Automatic Now Bottle Labeling Machine (Cylinder Typedị)
Akpaka Bottle Labeling Machine
Drup Bottle Labeling Machine
Igwe karama Label Machine
Labeling Machine N'ihi Gburugburu Karama
Ọgwụ Mbadamba Igwe ọgwụ
Now Bottle Labeling Machine
Ọkara Auto Bottle Labeling Machine
Obere kalama Label igwe
Mmanya kalama Labeling Machine
FK838 Automatic ụgbọelu Production Line Labeling ...
FK911 Igwe akụrụngwa akụrụngwa akụrụngwa
FK812 Akpaaka Card Labeling Machine
FK815 Automatic Plane Corner Labeling Machine
FK836 Automatic Production Line Side Labeling M ...
FK805 Automatic Now Bottle Labeling Machine (...
Okwu: Nke 15, Xingsan Road, Wusha, Chang'An Town, Dongguan City, Guangdong Province
Ekwentị: (086) 769-81886391
Copyright - 2013-2021: All Rights echekwabara.